Fepetra ara-teknika amin'ny famokarana peratra fitondra tena tsara
Inona no tondroin'ireo peratra fitondra? Ny peratra fitondra dia manondro ny fantsom-by tsy misy fangarony izay voahodina mafana na mangatsiaka mangatsiaka (hatetika mangatsiaka) hanamboarana peratra fitondra mihetsiketsika mahazatra. Ny savaivony ivelany an'ny fantsom-by dia 25-180mm, ary ny hatevin'ny rindrina dia 3.5-20mm, izay azo zaraina int ...
Ny bearings tsy misy solika dia karazana bearings lubricated vaovao, miaraka amin'ny toetran'ny bearings vy sy bearings tsy misy menaka. Izy io dia feno metaly metaly ary nohosorana diloilo fanosotra manokana. Izy io dia manana ny mampiavaka ny fahaizany mitondra avo, ny fanoherana ny fiantraikany, ny temperatu avo ...
Fantatrao ve ireo bearings amin'ny faritra mekanika? Izy ireo dia antsoina hoe "sakafo amin'ny indostrian'ny mekanika" ary be mpampiasa amin'ny faritra milina manan-danja. Satria miasa amin'ny toerana tsy hita ireo faritra lehibe ireo, matetika dia tsy takatry ny tsy matihanina izy ireo. Betsaka ny tsy mekanika ...